The Vanderes Foundation joins Zomia as funder | Zomia SPC
Today we are happy to share that we have closedapartnership with the Vanderes Foundation. The partnership includes the funding of dozens of new students in 2018, making them the first institutional funder on our platform.
SEATTLE/AMSTERDAM/SINGAPORE/YANGON, 21 March 2018
Zomia,apeer-to-peer lender that connects funders with students from marginalized communities, today announcedamulti-year partnership with the Vanderes Foundation,aDutch education focussed foundation. The partnership will ensure dozens of excellent students from primarily Myanmar and Cambodia will get to pursue university degrees.
“We are extremely excited by the trust Vanderes is placing in us and are happy to bring them on board as our first institutional funder. Their support will allow us to expand our offerings to additional students.” — Ryker Labbee – Co-founder of Zomia
Since 2014, Zomia has extended loans to 77 students, helping them secure places in universities and layasolid foundation on which to build their professional lives. Creatingameasurable impact in the lives of its students is at the core of the young firm’s mission. 23 students have already graduated and taken jobs and5have completely repaid their loans.
The funding provided by Vanderes constitutesasignificant part of Zomia’s 2018/2019 need. For the foundation, it is the first project they have chosen to back.
“We were very impressed by what Ryker and Kirk have done with Zomia and feel it isagreat fit for us asaFoundation. We look forward to supporting them in years to come and having lasting impact in the lives of their students.” — Mirte Gosker – Chairwoman of the Vanderes Foundation
All of the funds committed by Vanderes will be directly allocated to student loans. Zomia funds its own operations throughacombination of donations, other services and overpayment received on loans. Today’s partnership, through recycling of repayments, will not just provide funding for students from the 2018/2019 class, but also for years to come.
Vanderes’ funds come on top of Zomia’s regular crowdfunding and provideabasis for further institutional partnerships.
Launched in 2014, Zomia isapeer-to-peer lending company that connects funders with talented students from marginalized communities. Zomia presently serves students in Southeast Asia. Connect, learn more, and join them in helping make financing for higher education accessible for all.
The Vanderes Foundation isacertified Dutch Public Benefit Organisation. It was founded to improve the access to and quality of education around the globe. At its core is the belief that education is one of the main ways to permanently escape poverty, as it transcends generations.
Kirk Acevedo – Co-founder Zomia SPC
Telephone: +1 (425) 610-8551 Email: info@zomia.org
စီရေတယ်/အမ်စတာဒန်/စင်ကာပူ/ရန်ကုန် – မတ်လ ၂၁, ၂၀၁၈
အချင်းချင်း ငွေချေးမှုစနစ်ကို ကျင့်သုံးသော ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည့် ဇိုမီယာသည် တက္ကသိုလ်အဆင့်ပညာသင်ယူနိုင်ရန် အခွင့်အရေးနည်းပါးသော အသိုင်းအ၀ိုင်းမှလာသည့် ကျောင်းသားကျောင်းသူများကို ငွေကြေးချေးငှားပေးသူများနှင့် ချိတ်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ယင်းအဖွဲ့အစည်းသည် ပညာရေးဦးစားပေး ဒတ်ချ်ဖောင်ဒေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်သည့် ဗန်ဒရက်စ်ဖောင်ဒေးရှင်းနှင့် နှစ်ပေါင်းများစွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပြုရန် ကြေငြာခဲ့သည်.။ ဤပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသည် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှ ထူးချွန်သောကျောင်းသားများကို အဓိကထား၍ တက္ကသိုလ်အဆင့်ပညာရေး သင်ယူနိုင်ရန် အကူအညီပေးမည်ဖြစ်သည်။
“ဗန်ဒရက်စ်ဖောင်ဒေးရှင်းအနေနှင့် ကျွန်တော်တို့ကို ဒီလိုယုံကြည်ပေးတဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ အင်မတန်မှ စိတ်လှုပ်ရှားရပါတယ်။ ပြီးတော့လည်း ကျွန်တော်တို့ရဲ ပထမဦးဆုံး ငွေကြေးထောက်ပံ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေနဲ့ သူတို့နဲ့ အတူတူလက်တွဲလုပ်ဆောင်ခွင့်ရတာ အများကြီး၀မ်းသာပါတယ်။သူတို့ရဲ့ထောက်ပံ့ကူညီမှုဟာ ကျွန်တော်တို့ကို နောက်ထပ်ကျောင်းသားတွေကို တိုးချဲ့အကူအညီပေးနိုင်ဖို့ အထောက်အကူပေးပါလိမ့်မယ်” ဟု ဇိုမီယာအဖွဲ့အစည်းကို ပူးတွဲတည်ထောင်သူ ရိုင်ကယ်လက်ဘီမှ ပြောကြားလာပါသည်။
၂၀၁၄ ခုနှစ်မှစတင်၍ ဇိုမီယာသည် ကျောင်းသားပေါင်း ၇၇ ဦးကို တက္ကသိုလ်များတွင် နေရာတစ်နေရာရရှိရန်နှင့် မိမိတို့၏အလုပ်အကိုင်အတွက် ခိုင်ခံ့သောအခြေခံအုတ်မြစ်များချထားနိုင်ရန် ကျောင်းသားများကို ချေးငွေများ ထောက်ပံ့ပေးနေခြင်းဖြစ်သည်။ ကျောင်းသားများ၏ ဘ၀တွင် ကြီးမားသောပြောင်းလဲမှုကို ဖန်တီးပေးရန်မှာ ဤသက်တမ်းနုနယ်သေးသော ကုမ္ပဏီ၏ အဓိကကျသောပန်းတိုင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထောက်ပံ့ပေးနေသော ကျောင်းသားများအနက် ၂၃ ဦးမှာ ဘွဲ့များရရှိကာ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းခွင်များတွင် ၀င်ရောက်လုပ်ကိုင်နေကြပြီဖြစ်ပြီး ၅ဦးမှာ မိမိတို့ချေးငွေများကို ကျေလည်အောင် ပြန်လည်ဆပ်၍ ပြီးကြပြီဖြစ်သည်။
ဗန်ဒရက်စ်ဖောင်ဒေးရှင်းမှ ပေးသောထောက်ပံ့ငွေများမှာ ဇိုမီယာ၏ ၂၀၁၈/၂၀၁၉ လိုအပ်ချက်အတွက် ကြီးမားသော ဖြည့်ဆည်းပေးမှုကြီးပင်ဖြစ်သည်။ ဗန်ဒရက်စ်ဖောင်ဒေးရှင်း အနေနှင့်လည်း ဇိုမီယာအားထောက်ပံ့ခြင်းမှာ သူတို့၏ ပထမဦးဆုံးသော ပရေ၈ျက်ပင်ဖြစ်သည်။
“ရိုက်ကယ်နှင့် ခက်ရ်တို့နှစ်ယောက် ဇိုမီယာကိုတည်ထောင်ပြီးတော့ ကျောင်းသားတွေအတွက် အခုလို ကူညီပေးနေတာတွေဟာ ကျွန်မတို့ကိုအင်မတန် အံအားသင့်စေပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ လုပ်ငန်းစဥ်တွေဟာ ကျွန်မတို့ ဖောင်ဒေးရှင်းနှင့် အရမ်းကို ကိုက်ညီတယ်လို့လည်း ခံစားရပါတယ်။ လာမည့်နှစ်တွေမှာလည်း သူတို့ကို အခုလို ထောက်ပံ့ကူညီသွားနိုင်ဖို့ မျှော့်လင့်နေပါတယ်။ အဲလိုနည်းနဲ့ ကျောင်းသားတွေရဲ့ ဘ၀မှာလည်း ရေရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်မယ်လို့လည်း မျှော့်လင်ပါတယ်” ဟု ဗန်ဒရက်စ်ဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့ ဥက္ကဌဖြစ်သူ မယ်ရ်ထယ်၈ေါ့စကာမှ ပြောဆိုသွားပါသည်။
ဗန်ဒရက်စ်ဖောင်ဒေးရှင်းမှ ထောက်ပံ့ကူညီငွေများအားလုံးသည် ကျောင်းသားများကို ချေးငွေများ ထုတ်ပေးရာတွင်သာ အသုံးပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဇိုမီယာအနေနှင့် မိမိတို့၏ အခြား လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု ကုန်ကျစရိတ်များအတွက်မူ စုပေါင်းအလှူငွေများ၊ အခြားသော၀န်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများ၊ ချေးငွေပြန်လည်ဆပ်ရာတွင် ပိုသောငွေအချို့တို့ကိုသာ အသုံးပြုသည်။ ယနေ့ပြုလုပ်လိုက်သော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကြီးသည် ၂၀၁၈/၂၀၁၉ တွင် ပညာသင်ယူကြမည့် ကျောင်းသားများအတွက် ထောက်ပံ့ငွေများကို ဖန်တီးပေးရုံမျှမက ကျောင်းသားများထံမှ ချေးငွေပြန်လည်ပေးချေငွေများတဆင့် လာမည့်နှစ်များအတွက်လည်း ထောက်ပံ့ငွေများ ရရှိစေမည်ဖြစ်သည်။
ဗန်ဒရက်စ်ဖောင်ဒေးရှင်း၏ ထောက်ပံ့ငွေမှာ ဇိုမီယာမှလက်ခံရရှိဖူးသော ပုံမှန်အစုလိုက်ထောက်ပံ့ငွေပမာဏများထဲတွင် ထိပ်ဆုံး၌ရှိနေပြီး ဇိုမီယာ၏ နောက်လာမည့် အခြားသောအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများအတွက် ကောင်းသောအစပျိုးမှုပင်ဖြစ်သည်။
ဇိုမီယာကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် စတင်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့သည်။ ဇိုမီယာသည် အချင်းချင်း ငွေချေးမှုစနစ်ကို အသုံးပြုသောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီး ငွေချေးသူများနှင့် ပညာသင်ယူရန် အခွင့်အရေးနည်းပါးသော အသိုင်းအ၀ိုင်းမှ ထူးချွန်သောကျောင်းသားများကို ချိတ်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ဇိုမီယာအနေဖြင့် လက်ရှိတွင် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများမှ ကျောင်းသားများကို ချေးငွေများ ထောက်ပံ့ကူညီပေးနေသည်။ ဇိုမီယာအား ဆက်သွယ်၍ သူတို့အကြောင်းလေ့လာမှုများ ပြုလုပ်ကာ သူတို့နှင့်အတူလက်တွဲပါ၀င်ပြီး ကျောင်းသားများအားလုံး တက္ကသိုလ်
ဗန်ဒရက်စ်ဖောင်ဒေးရှင်းသည် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရ ဒတ်ချ်ပြည်သူ့အကျိုးပြု အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤဖောင်ဒေးရှင်းအား ကမ္ဘာတစ်၀ှမ်းလုံးတွင် ပညာသင်ယူနိုင်မှုအခွင့်အရေးနှင့် ပညာရေးအရည်အသွေးတိုးတက်အောင် လုပ်ဆောင်ရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုအဖွဲ့အစည်း အနေဖြင့် ပညာရေးသည် ဆင်းရဲမွဲတေမှုမှ တစ်သက်လုံးလွတ်မြောက်နိုင်စေသော အဓိကကျသည့် နည်းလမ်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်ဟု အခိုင်အမာယုံကြည်ထားသည်။ ပညာရေးသည် မျိုးရိုးစဥ်ဆက် လက်ဆင့်ကမ်းနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ခက်ရ် အေစယ်ဗီဒို – ဇိုမီယာ ပူးတွဲတည်ထောင်သူ
ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ် – +၁ (၄၂၅) ၆၁၀ – ၈၅၅၁
အီးမေးလ် – info@zomia.org